IPhakamileyo yeSierra Betas, iZiko ledatha laseIreland, uDenise oMncinci, kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
UJordi Gimenez | | iapile, Apple Pay, Izaziso
Kule veki sizise ngokusesikweni Iinguqulelo ezimbini ze-beta ezilandelelanayo kwi-MacOS High Sierra 10.13.2Eyokuqala ngoMvulo omnye nangolandelayo, eyayiyinguqulelo ye-beta 4 yenkqubo yonjiniyela, yafika ngobusuku bangoLwesine. Ukongeza kwezi nguqulelo ze-beta zeMac, uApple ukhuphe ingxelo yokugqibela ye-iOS 11.1.2 ngesisombululo kwiingxaki ezahlukeneyo ezinje "ngokuqandisa" kwescreen, njl.
Akuthandabuzeki kule nyanga kaNovemba inomdla kakhulu ngokumalunga neendaba ezinxulumene nenkampani yeapile yokulunywa. Kodwa makhe sibone ngokweenkcukacha ezo ndaba ziye zema kancinci kancinci ndisuka eMac.
I-beta 3 yokuqala ikhutshiwe Ngomvulo wokugqibela nasemva IMacOS High Sierra beta 4 ngoLwesine zimbini zeendaba ezibalaseleyo. Kwaye ayisiyiyo kuba kwezi nguqulelo zintsha sifumana utshintsho olukhulu xa kuthelekiswa ne-beta yangaphambili yabaphuhlisi, kunjalo ngokusisiseko ngenxa yokuhamba rhoqo kwezi zinto.
Kwelinye icala, sikwazisa okubalaseleyo kule veki, yiyo loo nto iibhanki ezininzi kunye nomqhubi weOrange yongeza ukuhambelana kweApple Pay. I-Openbank, iOrange Cash kunye ne-N26 Sele zifumaneka kubathengi bakho.
Ezinye iindaba ezibalaseleyo zezi zibonakala kule veki zinxulumene ne- Iziko ledatha lika-Apple eIreland. Kubonakala ngathi eli ziko lase-Ireland alinakwakhiwa njengoko i-CEO ye-Apple ngokwakhe ichaza kudliwanondlebe, uyakuqinisekisa oko okwangoku abazi ukuba umsebenzi wokwakha uza kuqala nini.
Kwaye ekugqibeleni sishiya iindaba zangoLwesihlanu ophelileyo apho isekela mongameli lokwahluka kunye nokubandakanywa kweApple kubhengeza ngubani ozakushiya isikhundla sakhe xa kuphela unyaka. UDenise Young, uyakuyishiya inkampani iinyanga ezi-7 emva kokutshintsha isikhundla ngaphakathi kwinkampani yeCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IPhakamileyo yeSierra Betas, iZiko ledatha laseIreland, uDenise oMncinci, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac